ဦး LIVE - ပစ်လွှတ်စီး, ပို့စ်များဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ
မှတ်ပုံတင်ခြင်း ယင်း App ကိုဖွင့်ပါ လော့ဂ်အင်
launch စီး, post ကိုဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများ
ဦးသုံးစွဲသူများ pics နှင့်ဗီဒီယိုများဝေမျှဖြည့်ဆည်းနှင့်အွန်လိုင်း chat တဲ့ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ် LIVE ။ သင့်ရဲ့ content တွေကိုမျှဝေပါသို့မဟုတ်ဝဘ်ကင်မရာကနေတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုသူများနှင့်အတူ chat တစ်စီးကိုစတင်ပါ။
တစ်ဦးအေးမြပြပွဲစတင်ရန်နှင့်ကြည့်ရှုပိုမိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ချက်ထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းဆွေးနွေးတစ်ရပ်တည်ချက်-Up လုပ်ဆောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အစာရှောင်ခြင်းငရုတ်သီးစားပင်ဒီဦး LIVE အပေါ်ဖြစ်နိုင် workshop- start!
ကြည့်ရှုသူများသည် 1 ကလစ်အတွက်ဒင်္ဂါးပြားများပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်စီးဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်နိုင်ပါတယ်။
သင့်ဒက်ရှ်ဘုတ် passive ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ , ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုရေးသားအေးမြဖော်ပြချက် add နှင့်အမြင်များကိုစုဆောင်းပါ။
တစ်ခုချင်းစီကိုဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုမှုတစ်ဦးကိုကြည့်ရှုသူများကပေးဆောင်လျက်ရှိ၏ တစ်ဦးချင်းစီကို 50 အမြင်များ - ဦးတိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်
လူမှုရေးပိုက်ကွန်ထဲမှာ Ulive.Chat မှ link တစ်ခု Share, သင့်ဘ်ဆိုဒ်မှာ post သို့မဟုတ်သင်ပါဝင်ပါဘူးမြား၏ဝယ်ယူမှုအနေဖြင့်စိတ်ဝင်စားမှုရဖို့သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုမှပေးပို့ပါ။
ဦးတိုက်ရိုက် အသုံးပြု. အကြောင်းအရာအလိုက်စီး built-in functional ဖြစ်စေခွင့်ပြုပါတယ်။ သငျသညျကင်မရာများ၏ရှေ့မှောက်၌အဘယ်သို့ပြုရမည်ထင်ရန်ရှိသည်ဘူး! တစ်ဆောင်ပုဒ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ Choose ်စားဆင်ယင်ကုဒ်နှင့်အညီသင့်ရဲ့ outift ပြင်ဆင်ပရိတ်သတ်များနှင့်အတူ chatting ကနေဝင်ငွေ။ ကြည့်ရှုသူများကသင်၏ပြပွဲကိုညွှန်ကြားကြပါစို့။
မွှေးသွားရှိပါသလား? ကင်မရာကိုအပေါ်သကြားလုံးစားခြင်းအဘို့အဒင်္ဂါးပြားကိုရယူပါ။ သငျသညျ carbs ကိုချစ်ဘယ်လောက်ကြည့်ရှုပြရန်!
ULIVE စီးရုံနှစျခုကလစ်အတွက်ဖြန့်ချိသည်။ ကြိုးစားပါနှင့်သည်မည်မျှလွယ်ကူသောတွေ့မြင်!
သင့်ရဲ့မိခင်ဘာသာစကားနှင့် built-in autotranslator အပေါ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနိုင်ငံခြားသားတွေအရာကြွင်းလေပြုကြလိမ့်မည်။
အတော်များများကထုတ်လွှင့်လျှို့ဝှက်ချက်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာထွက်သွားဖို့ကိုလိုလားကြပါတယ်။ ဦးတိုက်ရိုက်သင်တစ်ဦးအဆင်ပြေအမည်ဝှက်အဆင့်ကိုရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ရုံအသုံးပြုသူပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်အထူးသဖြင့်နိုင်ငံများအဘို့အ blackisting ကိုအသုံးပြုပါ။
အကြွေစေ့ ၅၀၀၀ တိုင်းကို ၁ ဒေါ်လာနဲ့လဲပါ။ ငွေထုတ်ရန်အနည်းဆုံးဒေါ်လာသည် ၁၀ ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်အထဲက Check ယနေ့ဝင်ငွေ!
သတ်မှတ်ချက်များ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ Creator Agreement Affiliate agreement ထောက်ပံ့
အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာ Affiliate Program ကို အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ